Iindaba-Uhlalutyo lwendlela yophuhliso lwexesha elizayo kwishishini lokubhala lase China
1. Ushwankathelo lophuhliso loshishino lwezinto zokubhala
Izinto zokubhala zizinto ezahlukeneyo ezisetyenziswa ngabantu kwimisebenzi yenkcubeko efana nokufunda, iofisi, kunye nobomi basekhaya. Ngophuhliso oluqhubekayo loqoqosho kunye netekhnoloji, udidi lwezinto zokubhala nazo zihlala zihlaziywa kwaye ziphuhliswa. Izinto zokubhala zale mihla zinokwahlulwahlulwa zibe zizixhobo zokubhala, izinto zokubhala zabafundi, Zininzi izinto ezingaphantsi ezinje ngezinto zokubhala zeofisi, izixhobo zokufundisa, izinto zokubhala kunye nezinto zemidlalo.
Iipensile zezeshishini lokwahlulahlula izinto zokubhala, kwaye zihlala zikwindawo ebalulekileyo ekubhaleni iofisi. Amaqela abathengi bayo ikakhulu ngabafundi. Umzi mveliso wepensile waseTshayina wazalwa ngeminyaka yee-1930. Ngo-1932, eKowloon, eHong Kong, amaTshayina atyala imali aza aguqula umzi-mveliso wepensile oqhutywa ngusomashishini waseBritani wamenza umzi-mveliso odumileyo wepensile. Ngo-1933, iNkampani yePensile yaseBeijing yaseChina kunye neFenitshala yeHuenen yePensile yavela ngokulandelelana. UWu Gengmei, owabuya eJapan ngo-1935, waseka umzi-mveliso owenziweyo weepensile ojikelezayo eShanghai onokuthi uvelise ii-cores zelothe, iibhodi zeepensile, ababambi beepenisi kunye nokulungiswa kwembonakalo yedwa. Inkampani yaseHarbin China Standard Pencil, eyindibano kawonke-wonke neyabucala, yasekwa ngoSeptemba 1949. Le nkampani iseyeyona nkampani inkulu kushishino lweepensile kuzwelonke.
Iipensile zesiko zisebenzisa iinkuni njengomgqomo kunye negraphite njengeyona nto iphambili, efuna isixa esikhulu seenkuni ukuba zisetyenziswe. Inani elikhulu lokugawulwa kweenkuni liphula umthetho wokhuselo lokusingqongileyo. Ukuhlangabezana neemfuno zophuhliso lweemarike, ngo-1969, iTeijin Inkampani yavelisa indlela yokwenza iipensile zeplastiki. Ngehlobo lowe-1973, iBerol Inkampani yaseMelika kunye neNkampani yase-Sailorpen yaseJapan bathenga le nkqubo phantse ngaxeshanye. I-Sailorpen yaqala ukuvelisa ubunzima ngeepensile zeplastiki ngo-Epreli 1977. Ngelo xesha, isiseko seepensile zeplastiki senziwa ngomxube wegraphite kunye nentlaka yeABS, kwaye umphezulu okhokelayo wawugqunywe ngepeyinti yentlaka. I-extruders ezintathu zazisetyenziselwa ukudibanisa izinto ezintathu zokwenza ipensile, eyenze lula inkqubo yemveliso yepensile. Xa kuthelekiswa neepensile zemveli zemveli, iipensile zeplastiki ezenziwe nguSailorpen zilula ukusetyenziswa, kwaye aziyi kungcolisa iphepha nezandla. Ixabiso liyafana neepensile eziqhelekileyo. Iipensile zeplastiki ziye zathandwa. Ngo-1993, umenzi wezinto zokubhala waseJamani wenza umgca oqhubekayo wokuvelisa iipensile zeplastiki, ezinokuvelisa malunga neepensile ezingama-7,000 ngeyure enye. Iipensile zi-7.5 mm ubukhulu kunye ne-169 mm ubude. Ipensile yeplastiki ifuna ixabiso elisezantsi lemveliso kuneepensile zomthi, kwaye inokwenziwa ngeemilo ezahlukeneyo, ezinjengokukrolwa, zigzag, ezimilise okwentliziyo, njl.
Emva kophuhliso lwexesha elide kunye nokuqokelela, icandelo lezinto zokubhala eYurophu, eMelika, eJapan nakwamanye amazwe lithathe indawo ephambili kushishino lwezinto zokubhala. Nangona kunjalo, ngenxa yezinto ezinje ngendleko zabasebenzi kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo, amakhonkco ezinto zokubhala ezisezantsi asondele e-China, India nase India. IVietnam kunye namanye amazwe akumazantsi mpuma eAsia ngokuthe ngcembe atshintshela kumanqanaba okusebenza kophawu, uyilo lwemveliso, kunye nophando lwezinto kunye nophuhliso.
2. Uphuhliso oluqhubekayo kushishino lwezinto zokubhala
1) Ukusetyenziswa kwezinto zokubhala kuthambekele ekubeni kuphawulwe ngazo kwaye kwenziwe kube ngokwakho
Izixhobo zokubhala usiba zihlala zisetyenziswa kufundo lwemihla ngemihla nasemsebenzini. Ngokuphuculwa kwenqanaba lomvuzo labahlali kunye nokuphuculwa kweekhonsepthi zokusetyenziswa, abathengi bathambekele ngakumbi ekuthengeni iimveliso ngokusebenza ngokugqwesileyo ngokomgangatho wemveliso, inqanaba loyilo, umfanekiso wesiphelo, kunye nodumo lomsebenzisi. Iimveliso ezinophawu. I-brand yenziwa ngokubanzi komgangatho, iimpawu, ukusebenza, kunye namanqanaba okusetyenziswa kweemveliso zenkampani. Ibandakanya isitayile senkampani, umoya kunye nodumo, kwaye iya kuchaphazela ngokubanzi isimilo sabathengi sokuthenga.
2) Iitheminali zokuthengisa izinto zokubhala zihlala zibotshwe ngamatyathanga
Ngokuqiniswa kwendlela yokuphawula ukusetyenziswa kwezinto zokubhala, iinkampani zezinto zokubhala uphawu ziyaqhubeka ukukhuthaza indlela yokusebenza kwetyathanga, kwaye iivenkile zokubhala eziqhelekileyo zikwabonisa umkhwa wokuthatha inxaxheba ngokukuko kwintengiso. Iivenkile eziqhelekileyo zokubhala bezisetyenziswa njengeyona ndawo iphambili yokuthengisa izinto zokubhala, kodwa ngenxa yezithintelo zokungena eziphantsi kunye nokhuphiswano lwamaxabiso abukhali, iivenkile ezininzi zezinto zokubhala zinenzuzo ebuthathaka, imisebenzi engazinzanga kwaye ide ibaphelise ngenxa yolawulo olubi kunye nemali engonelanga. Imisebenzi yetyathanga lokushicilela uphawu lweFranchising ilungele ukuphucula umfanekiso wevenkile, ukuphucula ukubekwa komgangatho weemveliso ezithengisiweyo, kunye nokwandisa amandla okuxhathisa umngcipheko ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Ke ngoko, kule minyaka idlulileyo, imeko yokubaluleka kweetheminali zentengiso yezinto zokubhala ibalulekile.
3) Ukusetyenziswa kwezinto zokubhala kunika ingqalelo kukhetho lomntu kunye nesiphelo esiphakamileyo
Okwangoku, abafundi kunye nabasebenzi abancinci baseofisini bakhetha izinto zokubhala ezinobuntu, ezenziwe ngabantu kunye nefashoni. Izinto zokubhala ezinjalo zihlala zinoyilo olwahlukileyo, inoveli kunye nembonakalo yefashoni, kunye nemibala enemibala, enokuhlangabezana neemfuno ezisisiseko zomsebenzi kunye nokuphucula kakhulu amava omsebenzisi. Kwangelo xesha, kumabala emizobo, ezezimali, uyilo kunye nezipho, amaqela abathengi abhala izinto eziphezulu abaphezulu ayenyuka, kwaye izinto zokubhala eziphezulu ezinobuchwephesha obuqinileyo, umgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphezulu ngokuthe ngcembe iye yaba yindawo entsha eqaqambileyo yokukhuthaza Ukusetyenziswa kwezinto zokubhala. Ukufumana uhlalutyo olufanelekileyo lomzi mveliso, nceda ujonge ingxelo yovavanyo lwentengiso yeshishini lokubhala ekhutshwe yiHolo yeNgxelo yase China.